Android lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ny filalaovana lalao an-tserasera ho an'ny Android maimaim-poana dia iray amin'ireo fialamboly lehibe amin'ny ankizy, zatovo ary olon-dehibe. Na dia ny zokiolona aza dia lasa mpidoroka amin'ny kilalao finday. Amin'ny toe-javatra rehetra, afaka mahita zavatra mifanaraka amin'ny tombontsoa manokana sy ny safidinao manokana ianao. Ny sasany dia manana tic-tac-toe, ady an-dranomasina ary toy izany, ny hafa dia manana mpanamboatra mpanjono, karazana baolina na baolina kitra. Raha manana minitra maimaim-poana vitsivitsy ianao dia afaka manampy solitaire na mahjong, milalao laharana telo na Zuma, hiady amin'ny mpampihorohoro gangole na hamafy fields with wheat.
Smarty miboiboika Xmas Edition
Tantara momba ny alika
Sarotra momba ny Candy: Lalao Free 3
Om Nom Bubble
Miady amin'ny Janissary
Lolo Kyodai HD
Hafa Millennial Millennial
Mahery fo siramamy
tsy manam-petra miboiboika
Bubble Shooter Tsisy Fiafarana
Mahjong Paska Mamy
Ajanony ny bus
Fiarandalamby amin'ny tennis
Lalao Android tamin'ny Category:
Farany Android lalao
Simon Say Classic
Lalao piozila isa isa
Boky fandokoana Batman
Milomano 2 Ikarandoha
Angony ny isa: 8000!
Miverina any amin'ny Fashionistas any an-tsekoly
Biby Pic Tetriz
Voatifitra izy ireo
Pop It: toerana malalaka
Lalao Online Rehetra Android lalao an-tserasera
mahavariana ao amin'ny lalao Android
Ny olona maoderina dia tokony hifandray mandrakariva, fa ny finday dia tsy nitsahatra nanompo afa-tsy tamin'io. Ireo dia mozika pocket, saripika sy horonan-tsary, horonan-tsary mahaliana, tambajotra sosialy, rakipahalalana, e-boky, minicomputer, ary sehatra ho an'ny kilalao solosaina. Ao amin'ny tranokalanay no lalao tsara indrindra amin'ny Android, ary ny tsirairay dia afaka misafidy mora foana ny torolàlana izay mitondra ny ankamaroany.
Fandramana haingana sy maimaim-poana ny dingan-drakitra, ary maka segondra vitsy monja amin'ny fotoana ahafahanao manokatra ny fialam-boly voafantina. Ankehitriny, amin'ny toerana iray, dia misy ny kilalao tiany indrindra. Omeo azy ireo ny fahatsapana, ary ankafizo ny virtoaly virtoaly ary mamaha olana lehibe.
Miandry ny ranomasina ianao avy amin'ny genres:
Hazo ao anatin'ny laharana
Fitiavana mametraka firaketana fanatanjahan-tena, dia afeno ny lalao ho an'ny Android racing, baolina kitra, golf, ady totohondry ary maro ireo fahafahana handray anjara amin'ny ekipa na fifaninanana tokana. Tahaka ny ordinatera iray, raha afaka miditra amin'ny Internet ianao, dia afaka mifandray amin'ny mpilalao tena izy izay tsy dia mazoto loatra amin'ny fandresena anao.
Tsy mandeha isan'andro ny andro androany raha tsy milalao Android ianao, izay milalao solitaires, mameno backgammon na checkers, manaisotra zavatra telo avy ao amin'ilay tranonkala, mahazo tombony ary mahazo bebe kokoa.
Ankehitriny sarotra ny mieritreritra finday iray tsy misy io fialamboly io. Vetivety ihany ny finday dia lasa sangisangy, tsy mahaliana, ary tsy misy dikany ny manatsara azy, satria ny teknolojia taloha miaraka amin'ny bokotra dia mety ampy ho an'ny antso.
Touchscreen dia afaka mamela ny lalao Android amin'ny fomba mazava sy mora, na dia ho an'ny ankizy aza. Ny safidy momba ny fampandrosoana dia natao manokana ho azy ireo, izay ilaina mba hampidirana ny litera ao anaty efi-sela mba hiantsoana ilay lohahevitra ary hidera ny vokatra mety. Eto ianao dia afaka manangona piramida, mikaroka zavatra, mametraka piozila, mianatra loko ary mamaha ohatra. Maro ireo safidy tsy hamela ny ankizy sy ny ray aman-dreny ho sangisangy, satria omena ny lalao manokana ho an'ny Android isaky ny taona.
Afaka manamboatra dragona ianao ary miara-mandeha amin'izy ireo amin'ny ady, mandrehitra afo ary manimba trano. Ary miaraka amin'ny sabatra mitombo ny fambolena, sary sokitra, manangana trano, mahandro maromaro samihafa ary mametraka fanontaniana maro hafa amin'ireo nosy miparitaka any an-dranomasina.
Ary amin'ny fotoana iray hafa, tsy maintsy miaro ny valin'ny toeram-ponenanao ao an-tokantrano ianao amin'ny alalan'ny fambolena ambioka isan-karazany eo anoloan'ny trano mba hitoraka azy ireo amin'ny ahitra na hihinana azy ireo.
Tianao ny hampiofana ny eritreritrao? Avy eo dia milalao ny "Field of Miracles", teny, gallows, tanàna sy lalao hafa ho an'ny Android, izay tsy maintsy mamaly fanontaniana mifandraika amin'ny sehatra samihafa.
Ny kilalao malaza toy ny sangy Zuma na ireo izay tokony hitifitra ireo vondrona mitovy amin'ny basy ao amin'ilay tranonkala. Ity dingana tsotra ity dia mamoha fientanam-po ho an'ny olon-drehetra, tsy misy an-kanavaka, ary noho izany, dia toy izany koa ny sehatra mahafinaritra hita any amin'ny ankamaroan'ny finday ampiasain'ny robot maitso.
Raha ny marina dia ny lalao ordinatera dia mitovy amin'ny adapta amin'ny finday. Ny zazavavy sy ny ankizilahy dia afaka mameno ny tsiro tsiro, na kilalao izy ireo momba ny trano fisakafoanana, ankizy, biby, robots, fitaovam-piadiana, lamaody na fanatanjahan-tena. Afaka milalao amin'ny solosaina ianao na mpilalao mivantana, na maimaim-poana na amin'ny safidinao. Apetraho ny rakitsoranao manokana ary afaho ny olon-kafa, mijanòna ary mifanakalo vaovao. Ny tontolo virtoaly dia miaraka aminao ary manome fialamboly mahaliana.